Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMartinique Breaking » Iindiza ezisuka eUSA ziye eMartinique kwiAmerican Airlines ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zeMartinique Breaking • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iindiza ezisuka eUSA ziye eMartinique kwiAmerican Airlines ngoku.
Iinqwelomoya zaseMelika ziya kusebenzisa inqwelomoya ye-Embraer 175 enezihlalo ezingama-76 kwiinqwelo-moya zeyure ezintathu ezinesiqingatha ukusuka eUSA ukuya eMartinique.
Ngeendawo ezingaphezu kwama-35 ukuya kwiziqithi, i-American yinkampani yakho yomoya kwisiqithi saseFransi saseCaribbean saseMartinique.
I-American Airlines, eyona nkampani inkulu yeenqwelo moya e-US, liqabane elibalulekileyo lexesha elide leSiqithi seentyatyambo.
Ukuqala nge-6 kaNovemba, iAmerican Airlines izakuqala inkonzo yayo engapheliyo phakathi kwesikhululo senqwelomoya saseMiami kunye neAimé Césaire International Airport.
Iindiza eziya eMartinique ezivela eUnited States ziya kuphinda zibulele kwi-American Airlines. Ukuqala nge-6 kaNovemba, umphathi uza kuqala ngenkonzo yakhe engapheliyo phakathi kwesikhululo senqwelomoya saseMiami kunye neAimé Césaire International Airport. Iinqwelomoya ziya kusebenza kube kanye ngeveki ngeMigqibelo ngaphambi kokunyuka ukuya kathathu ngeveki ngolwe-Lwesibini, uLwesine nangoMgqibelo ngeKrisimesi nakwisiqingatha sesibini sikaFebruwari ukuya ngoMatshi.
"I-American Airlines, eyona nkampani inkulu yeenqwelo moya e-US liqabane elibalulekileyo ixesha elide kwiSiqithi seentyatyambo", utshilo uMkomishinala wezoKhenketho eMartinique uBénédicte di Geronimo. “Yiyo loo nto sonwabile ukwamkela umphathi wethu ophambili wase-US kunye nabo bonke abakhweli ngezandla ezishushu. Amava eMartinique aya kuqinisekisa iindwendwe zethu zaseMelika ngesizathu sokuba iMartinique ifumene imbasa yeGolide kutsha nje kwiiVenkile zeMagellan zeTyelelo lweveki yama-2021 njenge-Eco-Friendly "Green" Destination, ebizwa ngokuba yi # 1 Indawo eFikayo kwihlabathi ngo-2021 ngu-Tripadvisor , ngaphandle kokubala ukwahlula okubini okunikwe kutshanje yiUNESCO kukhetho lwethu oluqhelekileyo lwemveli Yole Boat kunye nokuchuma kwezinto eziphilayo ezahlukeneyo ”.
"Ngeendawo ezingaphezulu kwama-35 ukuya kwezi ziqithi, iAmerican yinqwelomoya yakho eya kwisiQithi iFrench Caribbean seMartinique, utshilo u-Evette Negron, uMphathi weNtengiso yeChannel kwiAmerican Airlines. "Kuluyolo lokwenene ukunika abahambi baseMelika ithuba lokufumanisa ubuhle kunye nembali etyebileyo yaseMartinique kulo lonke ukhuseleko, ukusukela kanye ngexesha lokubopha ibhanti lezihlalo."
Inqwelomoya ye-Embraer 175 enezihlalo ezingama-76 iya kusetyenziswa kwiinqwelomoya ezinesiqingatha seyure.